Qaabkee ayuu u shaqeeyaa hannaanka difaaca gantaallada ee Israaiil? | Xaysimo
Home War Qaabkee ayuu u shaqeeyaa hannaanka difaaca gantaallada ee Israaiil?
Qaabkee ayuu u shaqeeyaa hannaanka difaaca gantaallada ee Israaiil?
Dagaalkii ugu ba’naa ee muddo sanado ah dhexmara Israa’iil iyo Gaza ayaa waxa uu muuqaal kale u yeelay samada gobolkaas.
Muddo 5 maalmood gudahood ah, ururka Xamaas iyo xooggaga kale ee Falastiiniyiinta ayaa in ka badan 2,000 oo gantaal u ganay dhanka Israa’iil.
Ku dhawaad 90% gantaalladaas ayaa waxaa ka hortagay hannaanka difaaca hawada ee loo yaqaan Iron Dome, sida uu sheegay milateriga Israa’iil.
Iron Dome ayaa loo nashqadeeyay si uu uga hortago gantaallada ridada dhow ee khatarta ku ah Israa’iil.
Waxaa qorshaha hannaankan uu bilowday kadib dagaalkii ay Israa’iil la gashay Xisbullah sanadkii 2006, xilligaas oo gantaallada uga soo dhacay Lubnaan ay khasaare badan oo isugu jirta naf iyo maal ka geysteen gudaha dalkaas.
Israa’iil ayaa dagaalka kadib shaacisay inay sameysan doonto hannaan cusub oo ka hortagga gantaallada lagu soo gano.
Hannaanka Iron Dome oo ay wadajir u dhiseen shirkadaha Rafael Advanced Defense Systems iyo Israel Aerospace Industries ayaa la hawlgeliyay sanadkii 2011.
Qalabkan oo la rumaysan yahay inuu kamid yahay kuwa ugu horumarsan caalamka ayaa isticmaala raadaar si uu u aqoonsado isla markaana u burburiyo gantaallada ku socda Israa’iil ka hor inta aanay khasaare geysan.
Hannaankan oo ku shaqeeya jawi kasta ayaa si gaar ah loogu qaabeeyay in uu ka hortago hubka ridada gaaban, gaar ahaan gantaallada laga soo gano Gaza.
Kharash badan ayaa ku baxay sameynta Iron Dome, balse shirkadaha dhisay ayaa sheegay in faa’iidadiisa ugu weyn ay tahay in uu kala sooci karo gantaallada ku dhici kara deegaannada ay dadka ku badan yihiin iyo kuwa kale. Hannaanka ayaa beegsada oo keliya gantaallada loo arko inay khatarta yihiin.
Toban sano kadib markii la hawlgeliyay Iron Dome, Israa’iil ayaa hadda haysata toban xabo oo hannaankaas difaaca gantaallada ah, kuwaas oo la dhigay qeybo kala duwan oo dalkaas ah. Mid kasta oo kamid ah waxaa ku xiran saddex ama afar gane oo midkiiba uu ridi karo 20 gantaal oo ka hortag sameeya.
“Tirada Israa’iiliyiinta dhintay ama dhaawacmay ayaa aad u badan lahayd haddii uusan jirin Iron Dome, kaasoo badbaayiyay nafteena,” ayuu yiri Gaashaanle dhexe Jonathan Conricus oo ah afhayeenka milateriga Israa’iil.
Hase yeeshee khubarada qaar ayaa sheegay in tirada badan ee gantaalka ay Gaza ka soo ridayaan xooggaga Falastiiniyiinta uu yahay isku-day ay ku daalinayaan hannaanka Iron Dome, taasoo dhalisay walaac ah caqabadaha uu wajihi karo qalabka.
Tan iyo 2014, waxaa marar badan sare u kacday xiisadda labada dhinac, balse waxaa guulaystay dhowr xabbad joojin oo ay dhexdhexaadintooda lahaayeen Masar, Qatar iyo Qaramada Midoobay.
Inkastoo ay weli go’doonsan tahay Gaza, ururka Xamaas ayaa sii xajistay maamulka marinkaas, waxaana uu tayeeyay hubkiisa gantaallada ah.
Xaaladda bani’aadannimo ee shacabka labada milyan ah ee ku nool Gaza ayaa ka sii daraysa. Waxa ay dadkaas wajahaan gabaabsi dhanka biyaha, dawada iyo korontada ah.